Lacag ma lagugu siinayaa inaad ku noolaato Alaska? | Qadarka iyo u-qalmitaanka
Bogga ugu weyn Ma lagu siiyaa lacag si aad ugu noolaato Alaska? Haa! bal eeg inta
Waxaan maqlay dadka oo dhahaya waxaad ku noolaan kartaa oo lacag ku heli kartaa Alaska lacag la'aan. Nasiib darro, run ma aha, laakiin lacag ayaa lagu siin karaa si aad halkaas ugu noolaato. Su'aashu hadda waa 'Immisa '
Alaska dhul ahaan waa mid ka mid ah gobollada ugu waaweyn Mareykanka oo caan ku ah meelaha quruxda badan ee soo jiidashada leh. Ilaa inta ugu weyn, qiimaha maciishadda ayaa ah kan ugu sarreeya. Sidaa darteed, su'aasha ah "lacag ma lagu siinayaa inaad ku noolaato Alaska?"
Hagaag, dawladda gobolku iyada oo soo marta cashuuraha saliidda ee gobolka ayaa siisa muwaadiniinta saami qaybsiga si ay uga caawiyaan inay ku noolaadaan qiimaha sare ee nolosha.
Tirakoob ahaan, in ka badan $ 21 bilyan (£ 15.7 bilyan) ayaa la siiyay dadka Alaska tan iyo 1982 -kii.
Sannadkii 2018 -kii 736,239 codsi oo la helay, 670,759 ayaa la aqbalay, 639,247 qof ayaa la siiyay. Wadarta saami qaybsigu wuxuu ahaa $ 1,600.00 wadarta lacagta la bixiyayna waxay ka badnayd $ 1 bilyan.
Markaa, haddii aad qorsheynayso inaad si joogto ah ugu noolaato Alaska, waxaad bilaabi kartaa jeegag sannad kasta. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad sameysid shuruudaha.
Akhrinta qoraalkan ayaa kaa caawin doonta inaad fahanto waxa lagaa filayo inaad sameyso iyo inta aad filan karto.
Ku saabsan Alaska
Ku noolaanshaha Alaska ma qaalibaa?
Fursadaha Shaqo ee Yar
Maxay tahay sababta aad lacag ugu hesho inaad ku noolaato Alaska?
Sidee dadku u helaan lacag ay ugu noolaadaan Alaska?
Ku saabsan Sanduuqa Joogtada ah ee Alaska
Intee in le'eg ayaa lagu siiyaa si aad ugu noolaato Alaska?
Yaa u qalma in lacag la siiyo si uu ugu noolaado Alaska sanadkaan 2022
Sababaha kale ee ah inaan ku noolaado Alaska
Hantida Guryuhu waa mid la awoodi karo
Alaska waxay leedahay Goobo Qurux badan
Ma bixin doontid canshuurta dakhliga gobolka ama canshuurta iibka
Gobolku wuxuu leeyahay taariikh hodan ah oo gaar ah
Alaska lacag ma ku siiso inaad halkaas ku noolaato?
Akhri Sidoo kale:
Waxaan kugula talinayaa inaad si taxadar leh u akhrido.
Aan ku bilowno ka hadalka Alaska iyo sida ay u nool yihiin.
Alaska waa gobol ku yaal cirifka waqooyi -galbeed ee Xeebta Galbeed ee Mareykanka. Waxaa loo yaqaanaa xadka ugu dambeeya ee Ameerika iyo mid ka mid ah meelaha dalxiiska ugu caansan uguna caansan dunida.
Gobolku wuxuu leeyahay meelo qurux badan oo cajiib ah oo qof kasta jeclaan karo. Iyada oo leh buuraheeda barafka leh, heerkulka qabow, kaymaha cufan, iyo tundras-ka ballaaran, dhulka Alaska wuxuu u muuqdaa inuu soo jiito dad aad u adag, quud-doon badan.
Waxaan rabaa in la i siiyo lacag si aan u guursado ajnabi sanadka 2022: 4 shay oo ay tahay inaad had iyo jeer ogaato
Inkasta oo qiimaha nolosha ee Alaska uu aad u kala duwan yahay, guud ahaan waxaa loo arkaa mid sarreeya. Tani waa natiijada qaar ka mid ah qodobada aasaasiga ah sida:
Guud ahaan, xaddiga lacagta loo baahan yahay si loogu noolaado Alaska waxay inta badan ku xiran tahay nooca hab -nololeedka Alaska ee aad doorato.
XIDHIIDHKA: 10ka Siyaabood ee Ugu Wanaagsan ee Lacagaha Looga Sameeyo Eeyaha Sanadka 2022
Sida laga soo xigtay Numbeo.com, Helitaanka guri dabaq ah mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn sida Anchorage waa $1216 bishii. Dhanka kale, inaad guri ka hesho magaalo yar sida Kenai waa $837 bishii. Waxaad arki kartaa in aagga aad doorato inaad ku noolaato ay arrimo badan ku jiraan.
Qiimaha isticmaalka ee Alaska guud ahaan waa mid sarreeya, gaar ahaan xilliga jiilaalka. Inkasta oo magaalooyinka iyo magaalooyinka qaarkood ay ku kala duwan yihiin, haddana farqigu ma badna.
Cidina ma samayn karto cunto la'aan. Markaa, quudintu waxay ka mid tahay baahiyaha ugu muhiimsan ee ay tahay in la qanciyo.
Alaska, kuwa miyiga ku nool waxay u badan yihiin inay ku kharash gareeyaan cuntada marka loo eego kuwa magaalooyinka.
Tani waa sababta oo ah raashinka loo wareejiyo miyiga waa qaali, kharashkani wuxuu u gudbiyaa macaamiisha dhammaadka ah. Sidoo kale, cimilada gobolku kuma habboona in lagu beero inta badan cuntooyinka gudaha.
Kani waa kharash kale oo ku xiran meesha. Sidaa darteed, haddii aadan haysan baabuurkaaga Alaska, wax badan ayaad ku bixin doontaa gaadiidka. Sida caadiga ah, caymiska baabuurtu aad buu uga jaban yahay Alaska, halka gaaskuna ka qaalisan yahay.
Gaadiidka dadwaynuhu aad buu u kooban yahay, xataa magaalada ugu weyn uguna badan magaalada Alaska, Anchorage.
Dadka shaqo la'aanta ah ee shaqo la'aanta ah waxay la kulmaan caqabado dhowr ah Alaska. Sababtoo ah gobolku aad buu ugu yar yahay dadka, shaqooyinku waa yar yihiin, in kastoo aad sidoo kale leedahay tartan shaqo oo yar. Sidoo kale, gobolku wuxuu xiraa faa'iidooyinka shaqo la'aanta toddobaadlaha ah $ 370.
Si kasta oo aad u dhaqaale badan tahay ama sida aad miisaaniyadda u fiican tahay, taasi maahan lacag ku filan si loo joogteeyo xitaa hab nololeed lafo qaawan oo Alaska ah.
Xataa Alaska, waxaad ku samayn kartaa lacag deg -deg ah mid kasta oo ka mid ah 25 -kaan Siyaabood ee Lacag -bixinta si aad u qorto Faallooyin marka aad tahay qoraa wanaagsan.
Dawladda Alaska waxay lacag siisaa dadka deggan sababta oo ah waxay rabaan inay la kulmaan qiimaha qaaliga ah ee maciishadda.
Caadi ahaan, qiimaha nolosha ee Alaska waa mid aad u sarreeya marka la barbar dhigo gobollada kale ee Maraykanka.
Ku noolaanshaha Alaska aad ayay qaali u noqon kartaa iyadoo la tixgalinayo kharashyada kirada, yutiilitida, cuntada, gaadiidka, iyo kharashyada kale.
Dowladda gobolka ayaa muwaadiniinta siisa lacag Sanduuqa Joogtada ah ee Alaska. Lacagtani waa gunnooyinka shidaalka ee gobolka oo si siman loogu qaybiyo muwaadiniinta waxaana lagu bixiyaa iyada oo loo marayo saami -qaybsiga sannadlaha ah qof kasta oo ku nool Alaska xataa carruurta.
Sanduuqa Joogtada ah ee Alaska waxaa la aasaasay 1976 si uu u noqdo dhiirigelin maaliyadeed oo ka caawin karta dadka deggan Alaska inay kabaan qiimaha sare ee nolosha gobolka.
Kahor intaan la asaasin APF, 164 dhul oo ay dawladdu leedahay ayaa shirkad shidaal ah lagu xaraashay $ 900 milyan sannadkii 1969kii.
XIDHIIDHKA: 12ka Siyaabood ee Ugu Wanaagsan ee Loogu Bixin Karo Wadahadalka Ingiriisiga 2022
Tani waxay dhalisay muran ku saabsan halka ay tahay in lacagta la geeyo. Keith Harvey Miller, gudoomiyuhu wuxuu markaa ku riixay inay si toos ah ugu tagto dadka ku nool gobolka, qaar badanna way la wadaageen fikirkiisa.
Waxay ahayd fikraddan keentay in la aasaaso waxa maanta loo yaqaan Sanduuqa Joogtada ah ee Alaska.
Sida laga soo xigtay Waaxda Dakhliga Alaska, Qaddarka PFD wuxuu u dhexeeyay $ 331 illaa $ 2,072 qof walba ilaa 1982. Sannadkii 2015, lacagtu waxay ahayd $ 2,072 qof walba ama $ 8,288 qoys afar qof ah.
Tani waxay soo jeedinaysaa in qadarka qof kasta aanu ahayn mid taagan. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad weli raadinayso jawaabaha su'aashan "immisa lacag ah ayaa lagu siinayaa si aad ugu noolaato Alaska?", tThe State's Permanent Fund Dividend (PFD) Program wuxuu bixiyaa dhammaan dadka degan Alaska ee joogtada ah (carruurta iyo dadka waaweynba) yar. qayb ka mid ah hantida shidaalka ee gobolka sannadkii.
Sannadkii 2018, lacag-bixintu waxay ahayd $1,600 qofkiiba. Hadda, muwaadiniintu waxay helaan ilaa $2,000 sannadkii si ay ugu noolaadaan halkaas.
In kasta oo ay u ekaan karto mid aad u wanaagsan in run la ahaado, muwaadin kasta oo joogto ah ayaa u qalma in lacag lagu siiyo Alaska xitaa carruurta. Laakiin runtu waxay tahay in qof kasta oo soo codsan doona aanu lacag qaadan doonin.
Tusaale ahaan, sanadka 2018, 670,759 qof ayaa dalbaday, laakiin kaliya 629,820 ayaa la siiyay lacag. Tani waa sababta oo ah ma aysan buuxin shuruudaha.
Yacni, si aad u hesho saami -qaybsiga waa inaad buuxisaa shuruudo gaar ah. Markaa, ka hor intaadan ku fikirin inaad u guurto Alaska iyadoo ujeedadu tahay helitaanka saami -qaybsiga, hubso inaad buuxiso shuruudaha.
Waa kuwan qaar ka mid ah shuruudaha
Ma sheeganaysid degenaansho gobol kale ama wadan kale
Haddii aad jir ahaan joogtay Alaska 72 saacadood oo xiriir ah intii lagu jiray 2022 ama 2023.
Waa inaad leedahay qorshayaal aad si joogto ah ugu degto Alaska.
Waa laguu diidi doonaa haddii lagu xukumo, lagu xukumo, ama lagu xiro dembi culus inta lagu jiro sanadka.
Tan ugu muhiimsan, waa inaad ku nooshahay Alaska ugu yaraan 180 maalmood sannadka. Si kale haddii loo dhigo, waa inaad deganaansho buuxda ka sameysaa gobolka. Si kastaba ha noqotee, si aad taas u gaarto waa inaad tustaa caddeyn mid ka mid ah kuwan soo socda:
U -guuridda alaabta guriga Alaska iyo bixinta risiidhka maraakiibta
Heshiiska kirada ama kiraystaha ee magaca codsadaha
Lacagaha dekedda Moorage/doon (haddii aad ku nooshahay weel)
Shaqada, sida W2 ama sanduuqa mushaharka
Ruqsadda darawalnimada Alaska ama aqoonsi
Diiwaangelinta baabuurka (baabuur ama baabuur, ma aha mootada ama hoyga)
Gargaarka gobolka ee u baahan degenaanshaha sida Dheefaha Waayeelka ama Guriyeynta Alaska
In kasta oo gobolka aysan ka jirin shaqooyin noocaas ah, waxaad heli kartaa mid ka mid ah kuwan 20 Shaqooyin Bixiya $ 50 Saacad | In kabadan $ 100 / Maalin
XIDHIIDHKA: 15ka Kayd ee ugu Sarreeya ee Bixiya Qeybinta Billaha ah & ETFs sanadka 2022
Marka laga reebo xaqiiqda ah in lagu siin doono lacag aad ku nooshahay Alaska, waxaa jira faa'iidooyin badan oo aad heli doonto. Qaar ka mid ah waxaa ka mid ah:
Inkasta oo qiimaha nolosha Alaska uu aad u sarreeyo, hantida ma-guurtada ah waa mid la awoodi karo marka la barbar dhigo gobollada kale ee Maraykanka. Meel kasta oo aad rabto inaad degto, waxaa jira doorashooyin badan oo dhan Alaska ilaa inta laga hadlayo hantida ma-guurtada ah.
Ma jiraan wax ka xiiso badan marka lagu noolaado deegaan qurux badan oo wanaagsan. Keliya neecawda cusub iyo jawiga cajiibka ah ayaa kaa dhigi doona inaad sii noolaato.
Halkan, waxaad ku arki kartaa oo aad la kulmi kartaa duurjoogta ugu quruxda badan adduunka, iyo dhacdooyinka kale ee dabiiciga ah si joogto ah. Xaqiiqdii, markaad booqato Beerta Qaranka Denali ama xitaa Jasiiradda Aleutians, waad fahmi doontaa waxaan ka hadlayo.
Alaska waa mid ka mid ah dowladaha canshuuraha ugu hooseeya dalka. Waa mid ka mid ah shan gobol oo aan lahayn canshuur iibin, iyo mid ka mid ah toddobada gobol oo aan lahayn canshuur dakhli shaqsiyeed.
Degane ahaan, laguma weydiin doono inaad bixiso canshuurta dakhliga gobolka ama canshuurta iibka. Si kastaba ha ahaatee, waa inay bixiyaan kaliya canshuurta hantida. Tani waxay kaa caawin kartaa inaad wax badan keydiso xitaa qiimaha qaaliga ah ee nolosha.
Laga soo bilaabo bilowgeedii hore sida buundada dhulka oo fidisa Siberia ilaa ku dhawaaqisteeda rasmiga ah ee ah dowlad Mareykan ah 1959, Alaska waxay ku faantaa taariikh xiiso gaar ah leh oo firfircoon.
Ku noolaanshaha Alaska, waxaad ogaan doontaa in taariikhda hodanka ah ee gobolka ay ka muuqato jardiinooyinkeeda qaranka, farshaxan -yahannada, matxafyada, iyo warshadaha saliidda ee caanka ah. Si aad si dhow ugu fiirsato taariikhda Alaska, ka hubi halkan.
Nasiib darro, maya. Alaska lacag kuma siiso inaad halkaas ku noolaato. Si kastaba ha ahaatee, dadka deegaanka waxay dawladda ka helaan nooc lacag ah.
Lacagta laguuma siinayo si aad halkaas ugu noolaato, laakiin waa calaamad ka timid dawladda si ay u taageerto dadka deegaanka sababtoo ah qiimaha sare ee nolosha ee Alaska.
Waxaad arki kartaa in xitaa qiimaha sare ee nolosha ee Alaska, ay weli jiraan wax wanaagsan oo ku saabsan gobolka - waxaad heli doontaa jeegag bil kasta si aad ugu noolaato halkaas. Markaa, waa waqtigii aad joojin lahayd inaad u aragto qorshahaaga aad ugu guurayso Alaska fikrad xun.
10 Best Fursadaha Xirfadaha ee Mustaqbalka | 2022
Lacag Ku Bixi Si Aad Ugaadhsato Hogs: 10 Hababka Ugu Fiican adiga 2022
In muddo ah hadda, Hogs waxaa lagu calaamadeeyay khatarta dalagyada, xayawaanka beeraha, ama xitaa ugaadh ahaan…
Sida Loo Helo Lacag Badan Isla Markaad 18 Jirto
Barashada sida loo abuuro lacag sida cunugga waa karti qiimo leh oo si wanaagsan kuugu adeegi doonta inta…
21 Siyaabood Oo Lacag Looga Sameeyo New York (NYC) | Talooyin Aan La Faafin
Waxaan dareemayaa in mowduuca maqaalkan laga beddelo 21 dariiqo oo lacag lagu helo…
Salaan, waxaan ahay tifaftiraha ugu sarreeya ee shabakadan lacag-samaynta ah, TheWealthCircle, maantana waxaan ka wadahadli doonnaa…